Axmed Madoobe oo ugu baaqay xildhibaannada laga soo doortay Jubbaland inay ansixiyaan heshiiska doorashada iyo Ra’iisul wasaaraha cusub – Kalfadhi
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa shalay magaalada Mogadishu kulan kula qaatay Xildhibaannada labada gole ee laga soo doortay deegaannada Jubbaland.
Madaxweynaha iyo Xildhibaannada labada gole ayaa kulankooda uga hadlay xaaladdihii ugu dambeeyay deegaannada Jubbalanand shirarkii Mogadishu ee arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka al Shabaab ee deegaannada Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ayaa ugu baaqay inay ansixiyaan heshiiskii hannaanka doorashada oo ay gaareen dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale inay ansixiyaan Ra’iisul Wasaaraha cusub. Waxaa uu dhinaca kale sheegay in aanu cidna ku eedi doonin Xildhibaannada intii uu jiray khilaafkii Jubbaland iyo dowladda Federaalka haddii ay taageereen Dowladda, isagoo xusay in aanu jirin cid uu wax u qabo.
“Ra’iisul Wasaaraha la soo magacaabay waqtigiisa in aad kala shaqeysaan oo soo dhoweysaan, wixii idinka baahan yahay fulisaan, heshiiska siyaasadeed ayaa la gaaray ma ahan xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxad inay ku jirto”.